No. 2090, Thursday, March 21, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2090, Thursday, March 21, 2019
No. 2090, Thursday, March 21, 2019
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁ ရက် (ကြာသပတေး၊ မတ် ၂၁ ၊ ၂၀၁၉)
သေနတ်တွေ ဗုံးတွေ မလိုချင်တော့ပါ
‘‘စစ်ပွဲဖြစ်ပွားသည်နှင့် ပထမဆုံးကျဆုံးသူမှာ အမှန်တရားဖြစ်၏’’ ဟီရမ်ဂျွန်ဆင် (အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်)
အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန (NRPC) နှင့် NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးသည့် တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရှစ်ဖွဲ့အ ကြား ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိ နှိုင်းမည့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက် ရောက်မည့် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင် ရှစ်ဖွဲ့မှ ကိုယ်စား လှယ်များ ယမန်နေ့က နေပြည် တော်သို့ရောက်ရှိသည်။
မြောက်ဦးမြို့တွင် ဈေးဆိုင်များပိတ်ထားပြီး လူသွားလူလာမရှိဘဲ ခြောက်ကပ်
မြောက်ဦးမြို့တွင် ဈေးဆိုင်များ ပိတ်ထား ပြီး တစ်မြို့လုံး၌ လမ်းသွားလမ်းလာ လူများမတွေ့ ရဘဲ ခြောက်ကပ်နေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း မြောက်ဦးမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးထွန်းသာစိန်နှင့် ဒေသခံများက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တုအရေး ငါးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ အဖြေမထွက်သော်လည်း ဧပြီလမကုန်မီ ထပ်မံဆွေးနွေးရန် သဘောတူ
လွိုင်ကော်ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တုကိစ္စ အပြီး အပြတ်ဖြေရှင်းရန် ယမန်နေ့က ငါးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရာ ပြေလည်မှုမရရှိသော်လည်း ဧပြီလ မကုန်မီ ထပ်မံဆွေးနွေးရန် နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ သည်။
ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲပြီးစီး ယူရို ၄၇၆ သန်းကျော်ဖိုးရောင်းရ
၁၀ ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့သည့် (၅၆)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ တွင် ပုလဲ၊ ကျောက်မျက်နှင့် ကျောက်စိမ်းတွဲရောင်းရငွေ ယူရို၄၇၆ သန်းကျော်ရှိသည်ဟု ပြပွဲ ကျင်းပရေးကော်မတီက မတ်လ၂၀ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိစ္စ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဒေသခံများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့မည်
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး စီမံကိန်းတာဝန် ရှိသူများနှင့်ဒေသခံပြည်သူများကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များကပြောသည်။
မြို့ ၂၁ မြို့တွင် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတရားပွဲများကျင်းပမည်
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေ ပြည်တော်အပါအဝင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ မြို့ ၂၁ မြို့တွင် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတရား ပွဲများကို သာသနာရေးနှင့် ယဉ် ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက ပြော သည်
နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်နယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားမှုရှိနေ စဉ် မြန်မာနှင့်တရုတ်အစိုးရသည် ၂၄ နှစ်ကြာ မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သည့် နယ်နိမိတ်ပြန်လည်စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Apple က တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ iPad မျိုးဆက်သစ်များ
Apple ကုမ္ပဏီဟာ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ iPad မျိုးဆက်သစ်တွေကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ပွဲထုတ်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
တန်ခူးလေပြေ သီချင်း ကို သင်္ကြန်အမှတ်တရအဖြစ် သီဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းသီချင်း၏ Music Video တွင် အနုပညာလောကမှ သူငယ်ချင်းများက ပါဝင်ကူညီရိုက်ကူးထားကြောင်း ကျော်ထက်အောင်က ပြောသည်။
မမလေးယောက်ရဲ့ RichLady အမ်တီဗီ
ယုဇန၊ ရှင်ဖုန်း၊ ခင်ဘုဏ်းနှင့် ရေဗက္ကာဝင်းတို့ လေးဦးသီဆိုထားသည့် Rich Lady သီချင်း အမ်တီဗီကို မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။
သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးကျယ်ဆုံး နည်းပြအဖြစ် ရီးနာ့စ်မစ်ချယ်နှင့် ဖာဂူဆန်တို့ ထိပ်ဆုံး၌ရပ်တည်
သြဇာကြီးမားသော မဂ္ဂဇင်း France Football ၏သမိုင်းတစ် လျှောက် အကြီးကျယ်ဆုံးနည်းပြ ၅၀ ဦးစာရင်းတွင် နယ်သာလန် နည်းပြဟောင်း ရီးနာ့စ်မစ်ချယ်က ဦးဆောင်နေပြီး ဒုတိယနေရာ၌ မန်ယူနည်းပြဟောင်း ဖာဂူဆန်က ရပ်တည်နေသည်။
ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲ တိုက်ရိုက်မအောင်မြင်ပါကလည်း ရှုံးထွက်ကစားခွင့်ရှိသော ၁၆ သင်းရှိ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Nations League တွင် အုပ်စုဗိုလ်ဖြစ်ခဲ့ သော အသင်း ၁၆ သင်းအနေဖြင့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ ခြေစစ်ပွဲတိုက် ရိုက် မအောင်မြင်ပါက ရှုံးထွက် ကစားပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ပဲခူးတွင် ဆီဘောက်ဆာ ယာဉ်တိုက်မိ၍ ဆိုင်ကယ်စီးနင်း သူနှစ်ဦး အခင်းဖြစ်နေရာ၌ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဘုရားကြီးနယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ခန္တီးသို့ သွားရောက်သည့် NSCN-Kခေါင်းဆောင်အချို့ နှစ်ပတ်ကျော်အထိ အဆက်အသွယ်မရ၍ စိတ်ပူဟုမိသားစုဝင်ပြော
ခန္တီးသို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်မည်ဆိုကာ မတ်လ ပထမပတ်ကတည်းက ထွက်ခွာ ခဲ့သည့် နာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (NSCN-K) ခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် နှစ်ပတ်ကျော်ကြာသည်အထိ အဆက်အသွယ်မရ၍ စိတ်ပူနေကြောင်း NSCN-K ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအန်ကန့်၏ မြေးဖြစ်သူက ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ သေနတ်တွေ၊ ဗုံးတွေ မလိုပါဘူး။ မေတ္တာနဲ့ ကရုဏာပဲလိုအပ်ပါတယ်။ ♦ မာသာထရီဆာ (ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင်၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သော သူတော်စင်)
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူနှင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအသုံးချမှု ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်များကို ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းထားဟုဆို
မြေဈေးနှုန်း၊ တရုတ် CCCC ကုမ္ပဏီတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ခံနေရသော ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုနှင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အသုံးချမှုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်း ထားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ (NYDC) က မတ်လ ၁၉
ဒေါ်လာတန်ဖိုး ၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြန်မြင့်
ပြည်တွင်းငွေကြေးဈေး ကွက်တွင် ယခုလအတွင်း ကန် ဒေါ်လာတန်ဖိုး ၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီး လဆန်းပိုင်းက တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် ၁,၅၀၀ ခန့်ရှိရာမှ မတ်လ ၂၀ ရက်တွင် ကျပ် ၁,၅၃၀ သို့ မြင့်တက် လာသည်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သို့ ရောက်ရှိ
ဒီချုပ်အစိုးရသက်တမ်း တွင် တစ်ကျော့ပြန် မြင့်တက်လာ သော ငွေကြေးဖောင်းပွမှုသည် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် ၇ ဒသမ ၀၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိကြောင်းစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာ န ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံ စာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်မြို့ကမ်းနားလမ်းတွင် လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် ကျင်းပမည်
ပြည်မြို့ ကမ်းနားလမ်း တွင် ပထမအကြိမ်လမ်းလျှောက် သင်္ကြန်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ဇေ ယျက ပြောသည်။
လူငါးဦး သေဆုံးခဲ့သော အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုမှ ယာဉ်မောင်းကို မမိသေးဟုဆို
ကနီမြို့နယ် အလောင်း တော်ကဿပအမျိုးသားဥယျာဉ် ချောင်းမကြီးသစ်တောစခန်းအနီး တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောယာဉ်မတော် တဆမှုမှ ယာဉ်မောင်းအမျိုးသား ကို သုံးရက်ကြာသည်အထိ ဖမ်းမိ ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ကနီမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကိုကိုအောင်က ပြောသည်။
တောင်ကြီးတွင် ပြုလုပ်သော ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ လူတစ်သောင်းကျော် ဆင်နွှဲ
နှစ် (၇၀) မြောက် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအ နားကို မတ်လ ၂၀ ရက် နံနက်က တောင်ကြီးမြို့၌ကျင်းပပြီး ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသူ၊ တိုင်းရင်းသားတစ် သောင်းကျော် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ သည်။
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အဖြေရှာရန် CNF ထုတ်ပြန်
တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အချို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသော ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ညှိနှိုင်း အဖြေရှာရန် ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး (CNF)က တိုက်တွန်းသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ လေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း မြို့ နယ်ငါးခုရှိ လေဘေးသင့်ပြည်သူ များအား ထောက်ပံ့ငွေကျပ်သိန်း ၆၀ ခန့် ပေးအပ်ကြောင်း တိုင်း ဒေကြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးစဝီလီဖရန့်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ် ၂၀ ၌ မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် ရေပေးဝေမှု ၁၀ နာရီခန့် ပြတ်တောက်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ် ၂၀ ၌ မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် ရေ ပေးဝေမှု ၁၀ နာရီကြာ ပြတ် တောက်မည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ယမန်နေ့တွင် ကြေညာသည်။ မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် ရေ ကူးရေတွန်းစက်ကို လျှပ်စစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း၊ ငမိုး ရိပ်ရေသန့်စက်ရုံ (ညောင်နှစ်ပင်) ပထမအဆင့် ရေပိုက်များအစား ထိုးပြုပြင်ခြင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်၍ ယင်းနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၈ နာရီအတွင်း ရေအားလျော့နည်း ခြင်း၊ ရေပေးဝေမှုပြတ်တောက် ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ လက်ဆောင်ပရိုမိုးရှင်း ပေးနိုင်သည့် ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျ
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပ ရေတာများသည် ယခင်ကငွေ ဖြည့်သွင်းသည့် ပမာဏထက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် လက် ဆောင်ပရိုမိုးရှင်းပေးခွင့်ရှိသော် လည်း ယခုအခါ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း သာ လက်ဆောင်ပရိုမိုးရှင်းပေး ခွင့်ရှိတော့ကြောင်း မိုင်တဲလ်ပြင် ပဆက်ဆံရေးအရာရှိချုပ် ဦးဇော် မင်းဦးကပြောသည်။ ဖုန်းဘီလ်ဖြည့်သွင်းစဉ်အပို လက်ဆောင်ပေးသည့် ပရိုမိုးရှင်း များကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်က စတင်ကာ ရပ်ဆိုင်းရန်ဆက်သွယ် ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ညွှန် ကြားပြီးနောက် လက်ဆောင်ပရို မိုးရှင်းပေးနိုင်သည့် ရာခိုင်နှုန်း ပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းရောက် မြန်မာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သား ၃၀ ဧည့်စာရင်းမတိုင်၍ ဖမ်းဆီးခံရ
ထိုင်းနိုင်ငံ စမွတ်ပရာကန်ခရိုင်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာလုပ်သားများကို ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဝင်ရောက်စစ်ဆေးစဉ် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်းမရှိသည့် မြန်မာလုပ်သား ၃၀ ဖမ်းဆီးခံရသည်။
. ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိအားကစားစာစောင် ၄၂ စောင်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ က အကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်သော အသက် (၁၉) နှစ်အောက် ကမ္ဘာ့အ ကောင်းဆုံးစာရင်း ထိပ်သီးငါးဦးတွင် ချယ်လ်ဆီးတောင်ပံကစားသမား ဟူဆွန်အိုဒိုအီပါဝင်ကြောင်း Goal သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကဖော်ပြ သည်။
ကလပ်ပြိုင်ဆိုင်မှုများက အင်္ဂလန်အသင်းကို စိတ်ဝမ်းကွဲစေမည်မဟုတ်ဟု ကိန်းပြောကြား
မန်နေဂျာ ဂါရတ် ဆောက်သ်ဂိတ်လက်အောက် တွင် အင်္ဂလန်အသင်းစိတ်ဓာတ် ကြောင့် ကစားသမားများသည် လက်ရွေးစင်အသင်းသို့ သတင်း ပို့ချိန်၌ ၎င်းတို့၏ကလပ်အသင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုများကို ဘေးချိတ်ထား နိုင်သည်ဟု အသင်းခေါင်းဆောင် ဟယ်ရီကိန်းက ပြောကြားသည်။
လီဗာပူးမှ ရှာကွီရီဒဏ်ရာကြောင့် ယူရိုခြေစစ်ပွဲများ လွဲချော်
လီဗာပူးတောင်ပံကစားသမား ဇာဒန်ရှာကွီရီသည် ဒဏ်ရာကြောင့် ဆွစ်ဇာလန်၏ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲများကို လွဲချော် မည်ဖြစ်သည်။
No. 2210, Monday, August 19, 2019
No. 2209, Sunday, August 18, 2019
No. 2208, Saturday, August 17, 2019
No. 2207, Friday, August 16, 2019
No. 2206, Thursday, August 15, 2019
No. 2205, Tuesday, August 13, 2019
No. 2204, Monday, August 12, 2019
No. 2203, Sunday, August 11, 2019
No. 2202, Saturday, August 10, 2019
တည်ငြိမ်အောင် ရုန်းကန်နေသော ရှမ်းမြောက်မြို့တော်
Sun 18 Aug 2019 - 21:49
Sun 18 Aug 2019 - 21:44
Sun 18 Aug 2019 - 20:42
တပ်မတော်နှင့် မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ နှစ်ရက်အတွင်း တိုက်ပွဲ ၂၀ကျော်ဖြစ်
Sun 18 Aug 2019 - 20:36
ရခိုင်တွင် တပ်မတော်က ဖမ်းထားသည့် လူငယ်များအနက် ခြောက်ဦး အာမခံရ
Sun 18 Aug 2019 - 20:15
တာဝန်ရှိသူနှစ်ဦးကို ပါတီတာဝန်များမှ ရပ်ဆိုင်းမှု ဒီချုပ်အတည်ပြု
Sun 18 Aug 2019 - 20:14
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းအမည်အလွဲသုံး၍ ချေးငွေပေးမည်ဆိုကာ ပြည်မြို့တွင် လျှောက်လွှာများလိမ်ရောင်း
Sun 18 Aug 2019 - 20:13
ပီအက်စ်ဗီ တိုက်စစ်မှူး လိုဇာနို နာပိုလီတွင် ဆေးစစ်မှုခံယူမည်
Sun 18 Aug 2019 - 20:11
ရုရှားနိုင်ငံသားကို ဒိုင်ပွဲရပ်ဖြင့် ထွန်းထွန်းမင်း အနိုင်ရ
Sun 18 Aug 2019 - 20:08
ရေဘေးနှင့် မြေပြိုမှုကူညီရေး အလှူငွေ ကျပ်သန်း ၁၀၀ ကျော်ရရှိ
Sun 18 Aug 2019 - 19:52